Afrika Mainty · Febroary, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Afrika Mainty · Febroary, 2011
Tantara mikasika ny Afrika Mainty tamin'ny Febroary, 2011
Eoropa Andrefana 28 Febroary 2011
Kenyà 26 Febroary 2011
Ny Alatsinainy 28 Febroary 2011 dia toa sahala amin'ny manana ny lanjany ho an'ireo mponin'ny aterineto ao Kenya. Tanatin'ny fotoana maromaro izao ireo Keniana no miresaka any anaty Twitter, Facebook ary hatrany anaty mailaka no mifanontany raha fotoana izao tokony hampiasan-dry zareo ny tenifototra #KenyaFeb28 ao amin'ny Twitter mba handaminana ny hetsi-panoherana mikasika ny olana ara-politika, na tokony hampiasa hatrany io sehatra io handrisihana ny fitiavan-tanindrazana.
Cote d'Ivoire 25 Febroary 2011
Madagasikara: Adihevitra amin'ny fikasan'ny filoha teo aloha Ravalomanana hiverina an-tanindrazana
Madagasikara 23 Febroary 2011
Vao avy namely an'i Madagasikara ny rivo-doza tropikaly Binziga, nahafaty olona enina ary namela olona 7,500 tsy manan-kialofana. Kanefa dia mbola mifantoka amin'ny fiverenan'ny Filoha teo aloha Marc Ravalomanana ihany ny sain'ny maro, izay nanao fanambarana ary nanao fanambarana nandritra ny fihaonany tamin'ny mpanao gazety tany Johannesburg fa hiverina avy nanao sesintany tany Afrika Atsimo ny tenany.
Djibouti 22 Febroary 2011
Gabòna 21 Febroary 2011
Tanzania: Maneho hevitra momba ny fipoahana baomba tany amin'ny toby miaramila ny mpampiasa aterineto
Tanzania 20 Febroary 2011
Olona 30 fara-fahakeliny no maty tamin'ny fipoahana baomba maromaro taorian'ny loza tamin'ny Alakamisy vao mangiran-dratsy tany amin'ny toby miaramilan'ny Gongo la Mboto any Dar es Salaam, Tanzania. 22 fara-fahakeliny ny olona maty tamin'ny 2009 taorian'ny fipoahana baomba mahatsiravina tany amin'ny toerana fametrahana ny fitaovam-piadiana tany amin'ny toby miaramila any Mbagala any Dar es Salaam. Ity dia fanatsongàna fanehoan-kevitra avy amin'ny tontolon'ny blaogy sy twitter.
Sodana: Hiakatra an'i Nile anie ny rivotry ny fanovàna
Manaraka ny fandresen'ny vahoaka Ejiptianina, mikoriana mankany Ejipta ireo tweetin'i Sodane izay milaza hafatra mazava, "Hiakatra any amin'ny lohasaha ambonin'ny Nile anie ny rivotry ny fanovàna.”